မိုးဟေကိုက ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးပါဆိုတဲ့ နေတိုး..
အကယ်ဒမီ မင်းသားနေတိုး ကတော့တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ မင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဒါတင်မကသေးပါဘူး မင်းသားနေတိုးကတော့ အလွမ်းအဆွေးဟာသ ကျရာ ဇာတ်ရုပ်တွေနဲ့သူရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေဟာဆိုရင် အပိုအလိုမရှိ ကျရာနေရာကိုသဘာဝကျကျ ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးဘက်စုံထူးချွန်တဲ့ မင်းသားနေတိုးကတော့ သူ့ရဲ့ အနုပညာမောင်နှမဖြစ်တဲ့ မိုးဟေကိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားသွား ခဲ့တာကိုတော့ Apannpyay ချစ်ပရိသတ်ကြီး အတွက် […]
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ချီးမြင့်တဲ့ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ကြက်တောင်မယ်လေး မသက်ထားသူဇာ…
ရုပ်လေးကလည်းချော အားကစားမှာလည်း ထူးချွန်တဲ့ ကြက်တောင်မယ်လေး မသက်ထားသူဇာ ကတော့ လက်ရှိမှာတေ့ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီး ကော်မတီက ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့အထိမ်းအမှတ်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးမှ ချီးမြှင့်သော “အားကစားထူးချွန်” ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို ချီးမြင့်ခြင်း ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ထားသူဇာကတော့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ ကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ ပြိုင်ဖက်နိုင်ငံက […]
အသည်းကွဲလို့ LIVE လွှင့် ငိုယိုပြီး၊ SHAMPOO တွေသောက်ပြတဲ့ မိန်းကလေး နာမည်ကြီးနေ….
မလေးရှားနိုင်ငံကလို့ ယူဆရတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကတော့ သူမရဲ့ကောင်လေးက ထားသွားတာကို အကြောင်းပြုပြီး Live လွှင့်ကာ ငိုယိုခဲ့ပါတယ်။ ယင်းနောက် ကောင်မလေးဟာ ခေါင်းလျှော်ရှည်တွေကို ဖျော်ရည်အလား စိတ်မှာထားပြီး၊ အားရပါးရ သောက်ပြတာပါ။ ကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကိုတော့ မသိရပါဘူး။ ဒီဗွီဒိယိုကို Viralkan Ajer အမည်ရ Page က တင်ခဲ့တာပါ။ […]
သင်းသင်း က ဝေဠုကျော် အား ကာမလိမ်လည်ရယူမှု ပုဒ်မ (၄၁၇) ဖြင့် စွပ်စွဲ တရားစွဲဆို တိုင်ကြားထားသည့် အမှုကို ဒီကနေ့ ဇူလိုင်လ (၃) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် တရားရုံးမှာ ဆက်လက် စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ သင်းသင်းကတော့ ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းကျုံးပြီးတော့ ရမ်းထားတယ် […]
Victoria လေးသည် တစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ပဲ လိင်အကြမ်းဖက်ခံမှုနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကလေးသူငယ်အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုနေတယ်လို့ ပန်ဆယ်လိုပြော…
တစ်နိုင်ငံလုံးက စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စောင့်ကြည့် နေကြတဲ့ Victoria လေးအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Victoria လေးဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အရွယ်မတိုင်ခင် လိင်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကလေးသူငယ်အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုနေပါတယ်လို့ အိပန်ဆယ်လိုပြောကြားခဲ့ခြင်းကို ApannPyay မှ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။ Victoria လေးကိစ္စဟာ တစ်လကျော် ကြာတဲ့အထိ […]
ကိုယ့်ရဲ့သားသမီး ၃ယောက်ကိုသတ်ပစ်ပြီး အရိုးဆွေးတဲ့အထိပစ်ထားခဲ့တဲ့ ရက်စက်သူမိခင်…
မိခင်တစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့သားသမီး ၃ ယောက်ကိုသတ်ပစ်ပြီး ကလေးတစ်ယောက်ကိုဆို ကလေးသေးခံလေးဝတ်ထားတဲ့အရိုးခြောက်ဖြစ်တဲ့အထိကိုပစ်ထားခဲ့တယ်လို့ ရဲတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ ၄ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ သူမရဲ့မွေးကင်းစအရွယ်ကလေးအပါအ၀င် ကလေးသုံးယောက်ကိုသတ်မှုနဲ့ Erika Murray ဆိုတဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာ ဘယ်လိုသူ့ကလေးတွေကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံကို တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့တရားခွင်မှာအသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်သူမဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ကလေးငယ်တွေကိုသတ်ထားတဲ့ပုံဟာရက်စက်လွန်းလို့ လူတွေက ကလေးငယ်တွေသေဆုံးခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ကို ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အိမ် ( House of […]
အိပ်​ယာထဲလဲ​နေတဲ့ ယောက်ကျားနဲ့ ​နေမ​ကောင်းဖြစ်​​နေသူ သမီးငယ်​ကိုပါ ပစ်​​ပြေးသွားခဲ့တဲ့ မိခင်….
သန်​လျင်​မြို့နယ်​၊ ပျဉ်​​ထောင်​​ကျောင်း​ကျေးရွာမှာ​နေထိုင်​တဲ့ မမိုးမိုး ​ခေါ် မတင်​မိုးလို့​အမည်​ရသူ အမျိုးသမီးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်​လ ၂၇ ရက်​​နေ့​၊ ကြာသာပ​တေး မနက်​ ၅နာရီခွဲ ဝန်းကျင်​မှာ အိပ်​ယာထဲလဲ​နေတဲ့ လင်​​ယောကျာင်္းနဲ့ ​နေမ​ကောင်းဖြစ်​​နေတဲ့ သမီးငယ်​​လေးရဲ့ အ​ခြေအ​နေကိုပါ မညှာမတာမ​ထောက်​ထားဘဲ ပစ်​​ပြေး​ထွက်​ခွာသွားတယ်​လို့ သိရှိရပါတယ်​။ အခုအချိန်​မှာ နာမကျန်းတဲ့သမီးငယ်​​လေးနဲ့ လင်​​ယောကျာင်္းတို့က […]
ကိုယ်မမြင်မသိတဲ့ နံရံတစ်ချပ်ပဲခြားမယ့်တစ်ဖက်အခန်းမှာ နေထိုင်သူဟာသင့်ရင်သွေး၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်ဇနီးမယားဒါမှမဟုတ် သင့်ကိုတောင် လိင်အကြမ်းဖက်လာနိုင်တဲ့မုဒိမ်းကောင်၊ ရာဇဝတ်ကောင်၊ ခိုးဆိုး လုနှိုက်ပြီး သတ်ပစ်နိုင်တဲ့ အရူးတစ်ယောက် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ သင်မသိနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ လက်ခံလိုက်ပါ၊ ဒါဟာ ဒီလိုလူမျိုးတွေကို လွတ်မြောက်နေစေတဲ့ လူကောင်းဟန် ဆောင်ထားတဲ့ လူယုတ်မာတွေကြောင့်ပါပဲ၊ ငွေ၊ ရာထူး၊ အာဏာ၊ ဂုဏ်သိက္ခာ […]
‘‘ဒီအမှုမှန်မပေါ်မချင်း ကျွန်တော်တို့ကို သတ်နေသလိုပါပဲ’’ ဗစ်တိုးရီးယား၏ဖခင်
ဧည့်ခန်းတစ်ခုထဲတွင် (၃) နှစ်အရွယ်သမီးလေးတစ်ဦး ပြေး လွှားဆော့ ကစားနေသော်လည်း မျက်နှာမှာ မရွှင်ပျ။ နံဘေးတွင်ရှိ နေသည့် လူကြီးများ၏ မျက်နှာ ၌လည်း စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ အထင်း သား မြင်နေရသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားများ ရုံး စိုက်ရာ၊ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ များနေထိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမြို့ တော်တွင်ဖြစ်သည်။ ဗစ်တိုးရီး […]
ဟောစတမ်းအပြင် ယတြာလေးတွေပါလို့ သိမ်းထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။ သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဖတ်ရှု့နိုင်အောင် Like&Shareပေးကြပါအုံး …… 2019နှစ်အတွက်မိမိကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်းကို ဆရာမင်းသုခထံဖုန်းဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည်။ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပြီးလိုအင်ဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေ ကံဇာတာအညံ့များလည်းပပြောက်ပြီးကံပွင့် စန်းပွင့် မေတ္တာရေး အချစ်ရေးများ အဆင်ပြေကြပါစေ …။ ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာဆရာမင်းသုခ ၊၇၃လမ်း/၃၄-၃၅လမ်းကြား၊ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် မန္တလေးမြို့ ….Ph-09440243656 တနင်္ဂနွေသမီးများ ဒီကာလမှာမိမိအတွက်လုပ်စရာအလုပ်အကြွေးတွေများနေတတ်ပါတယ်။အရင်အပတ်ကမပြီးပြတ်သေး တဲ့ကိစ္စတွေဒီကာလမှာအပြီးသတ်လုပ်နေရတတ်ပါတယ်။ဖခင်ရှိသေးသူများ ဖခင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ပါ။ဒီကာလမှာအိုးအိမ်အပြောင်းအလဲမျိုးတွေ ၊အိမ်ပြင်ဆင်တာမျိုးတွေလဲကြုံနေရတတ်ပါတယ်။အားကိုးမရှာပါနဲ့၊မိမိကိုယ်သာအားကိုးပါ။လုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူများကိုမတိုင်ပင်ပါနဲ့ ၊အဖျက်စကားတွေပဲကြားရပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးနဲ့ပက်သက်ပြီးရသလောက်နဲ့ရောင့်ရဲလိုက်ပါ […]